စံထွန်းအောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၉၂၈-ခု၊ ဇူလိုင် (၁၄)ရက်နေ့
မိဘအမည် ဦးပု + ဒေါ်အေးရှင်
စံထွန်းအောင် [၁၉၂၈ - ၁၉၆၈][ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်အောင်မြို့တွင် အဖ ဦးပု၊ အမိ ဒေါ်အေးရှင်တို့က ၁၉၂၈ ခု ဇူလိုင် ၁၄ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ စတုတ္ထမြောက်သား ဖြစ်သည်။ ငယ်မည် အတွက်၊ အမည်ရင်းမှာ ဦးထွန်းကြည်ဝင်း ဖြစ်သည်။
၁ဝ တန်း အထိ ပညာ သင်ကြား ခဲ့သည်။ ပန်းချီ ပညာကို လေ့လာ လိုက်စားခဲ့၏။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်ခန့်က ရွှေတိဂုံ အနောက်ဘက် မုခ်တွင် ကျင်းပသော အရက် သေစာ ရှောင်ကြဉ်ရေး ပန်းချီ ပိုစတာ ပြိုင်ပွဲတွင် ပန်းချီ ရေးဆွဲ ယှဉ်ပြိုင်ရာ ဒုတိယဆု ဆွတ်ခူး ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်လည်း ဝါသနာ ပါသည်။ စာပေဗိမာန်ထုတ် မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း အတွက် လိုအပ်သည့် သစ်ပင် ပန်းမန် အသီးအနှံ ပုံများကို ရိုက်ကူး ပေးခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဝေါဟာရသစ် ရှာဖွေရေး စသော သုတေသန လုပ်ငန်းများ တွင်လည်း ဝါသနာ ထုံသည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရှုမဝ မဂ္ဂဇင်း၌ ဝတ္ထု စရေးသည်။ ၁၉၅၄ ခု စာပေဗိမာန် မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါး ပြိုင်ပွဲ ကြားမြင်သိစေ စာမူကို မောင်ယဉ်ကျေး ကလောင် အမည်နှင့် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ရာ ဒုတိယဆု ရရှိ ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စု ယဉ်ကျေးမှု ဌာနတွင် အထက်တန်း လက်ထောက် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရင်း ဆောင်းပါး၊ ဝတ္ထု ၁ဝဝ ခန့် ရေးသား ခဲ့သည်။ စံထွန်းအောင် အမည်ဖြင့်-
ဆယ့်နှစ်ရာသီ မှိုစိုက်ပျိုးနည်း (၁၉၆၁)၊
ငါးနှင့် ငါးမွေးမြူနည်း (၁၉၆၃)၊
မတော်တဆ ဘေးအန္တရာယ် (?)၊
ပြည်ထောင်စု ကျေးလက် ပျော်ရွှင်မှုများ (၁၉၆၄)၊
ပိုးသတ်ဆေး တောမီး (?)၊
စာအုပ်များနှင့် စိမ်းကြာတည့်နှောင်းပုံပြင် (၁၉၆၇)ဝတ္ထုကို ရေးခဲ့သည်။
"ပြည်ထောင်စု ကျေးလက် ပျော်ရွှင်မှုများ" စာမူဖြင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ် အနုပညာ စာပေ ဆိုင်ရာဆု၊ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ စာပေ ဒုတိယဆုကို ရရှိ ခဲ့သည်။ မောင်သိန်းဇံ ဟူသော ကလောင်နာမည်ဖြင့် စာပေဝေဘန်ရေးဆောင်းပါးများကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ ညနေတွင် ရန်ကင်း လေးထပ်တိုက် ၁၂ လုံးတန်း၌ အသည်းကင်ဆာ ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သည်။ (ငွေတာရီ မဂ္ဂဇင်းတွင် ကွယ်လွန် နေ့ကို ၂၆ ဩဂုတ်လဟု ပြသည်။ စိန်စိန်၏ ဆောင်းပါးတွင် "ဩဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာများတွင် 'စာရေးဆရာ စံထွန်းအောင် ကွယ်လွန်ရှာပြီ' ဆိုသော သတင်းဆိုး ..." ဟု ရေးထားသည်။)
ဒဂုန်ရွှေမျှား။ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေဆုများ။ စာ ၁၉၂ - ၁၉၃။
မလိခ။ မြန်မာ စာပေ အဘိဓာန် (၂)။ စာ ၁၃၇။
စံပြတင်ဦး။ မြန်မာ စာရေးဆရာ အဘိဓာန်။ စာ ၁ဝ၁ - ၁ဝ၂။
စာအုပ် လောက၊ ငွေတာရီ (အောက်တိုဘာ ၁၉၆၈)။ စာ ၁၆၈။
ဒေါင်းနွယ်ဆွေ။ သူကား မသိ၊ သေခြင်းသိ၏။ မြဝတီ (အောက်တိုဘာ ၁၉၆၈)။ စာ ၁၇၃ - ၁၇၇။
စိန်စိန်။ ဝင်္ကပါလမ်းမှ တမ်းတပါသည်၊ ရှုမဝ (ဒီဇင်ဘာ ၁၉၆၈)။ စာ ၁၂၁ - ၁၂၉။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စံထွန်းအောင်&oldid=236400" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဧပြီ ၂၀၁၅၊ ၀၉:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။